Wasiirka arrimaha gudaha & federaalka oo soo dhaweeyey doorahsadii Shariif Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, C/llaahi Goodax Barre ayaa hambalyeey doorashadii shalay magaalada Baydhabo ka dhacday ee madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed loogu doortay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Federaalka Shariif Xasan Sheekh Aadam.
Wasiir Goodax oo saaka wareysi siiyey VOA ayaa soo dhaaweeyey doorashadaas oo maalin ka hor gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari sheegay ineysan dowladdu aqoonsan doonin.
“Waan hambalyeynayaa doorashada Shariif Xasan, xukuumadda Soomaaliyana aad ayay usoo dhaweyneysaa in dadka deegaanku ku guuleystaan iney shirkooda soo gebagebeeyaan” ayuu yiri Wasiir Goodax.
Wasiir Goodax oo la weydiiyey sababta uu usoo dhaweeyey shir madaxda dowladda Soomaaliya ay horay u amreen in la hakiyo si wadatashi looga sameeyo tabashooyin jiray, ayaa ku jawaabay “Markii la soo saarayey go’aanka shirkaas lagu hakinayo waxaa laga cabsi qabay inuu saameyn ku yeesho khilaafka Xamar ka jiray, laakiin hadda sabab natiijada shirkaas loo diido ma jirto”.
Mar sii horreysay Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamud, R/wasaare Cabdiweli iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa qoraal wadajir ah oo ay saareen ku amray in shirkaas la hakiyo muddo 2 todobaad ah, hase ahaatee dheg jalaq looma siinin.
Habeen Hore ayaa qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha Baarlamaanka waxaa lagu sheegay in dowladdu aysan aqoonsan doonin natiijada shirkaas.
Arrintaan ayaa u muuqata mid sii adkeyn doonta khilaafka u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya oo haataan si weyn u kala jeeda.
Akhri: Faarax C/qaadir oo lambarka 1-aad ka ah wasiiradii saxiixay baaqa is casiladda RW Cabdiweli